Islamic Jihad iyo Israel oo xabad-joojin ku heshiiyey. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Islamic Jihad iyo Israel oo xabad-joojin ku heshiiyey.
Islamic Jihad iyo Israel oo xabad-joojin ku heshiiyey.
Previous articleRa’iisul Wasaare Khayre iyo Madaxweyne ku xigeenka Midowga Yurub oo Brussels ku kulmay.
Next articleGuddiga arrimaha Bulshada Golaha Aqalka sare BFS ayaa Dowlad Goboleedyada kulan la tashi ah kala yeeshay hindiso sharciyeedka mihnadlayaasha caafimaadka.+sawirro.